रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउने ७ खानेकुरा नखाएकै राम्रो – Rapti Khabar
रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सके कोराना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । त्यसका लागि त्यसै अनुसारको खानपानमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । दैनिक व्यायाम खानपानमा ध्यान दिएर प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आवश्यक हुन्छ ।
विशेष गरी खानपान र स्वास्थ्यमा ध्यान नपुर्याउँदा यो उमेरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनुका साथै शारीरिक अंगको कार्यक्षमतामा पनि कमी आउँछ ।
सुगर (मधुमेह) भएकाहरुले खानामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । खानामा गरिएको लापरबाहिले सुगर नियन्त्रित हुनुको सट्टा झनै अनियन्त्रित भएर जान्छ ।
यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा पर्दछ । यस्तोमा धेरै सुगरका बिरामीको चासो हुन्छ, केरा खान मिल्छ ?
साधारणतया केरा खाएमा सुगरका बिरामीलाई झन् समस्या हुने धारणा छ । तर यस रोगका बिरामीले केरा खानै हुदैन भन्ने चाहिँ हुदैन । थोरै मात्रामा केराको सेवन गरेमा यसले हानी होइन उल्टै फाइदा पुर्याउँछ ।
केरामा सोडियम, कोलेस्टेरोल र स्याच्युरेटेड चिल्लो कम मात्रा हुन्छ । त्यसैले हानी हुने सम्भावना कम हुन्छ । बरु केरामा शरीरलाई अत्यावश्यक पर्ने पोषक तत्व भिटामिन बी ६, पोटासियम र म्याग्निज पाउने गरिन्छ । त्यसैले सुगरका बिरामीहरुले केरा खान मिल्छ तर केरामा उच्च क्यालोरी हुने भएकाले यसको मात्रामा भने विचार पुर्याउनु पर्दछ ।
चिनी कममात्रा पाइने फलफूलमा स्याउ, नासपाती, एबोकाडो, सुन्तला पर्दछन् । तर मेवा र भुइँकटहरमा चिनीको मात्रा धेरै हुन्छ । केरामा केही मात्रा चिनी भएपनि यसलाई खादाँ सुगरका बिरामीलाई लाभ मिल्दछ । तर यसको मात्रा भने सिमित अर्थात थोरै हुनु पर्दछ । केरा खादाँ बदाम, गेडागुडीसँग खाए सुगरका बिरामीलाई फाइदा पुग्दछ ।
आमाबुवा बन्नुपर्ने १० कारण
अपवाद बाहेक हरेक विवाहित जोडी आमाबुवा बन्न चाहान्छन् । हरेक ब्यक्तिको जीवनमा सन्तानको विशेष महत्व हुने गर्दछ ।
सन्तान हुनु ब्यक्ति प्राकृतिक, मानसिक र ब्यवहारिक रुपले परिपक्क हुनु संकेतका रुपमा बुझिन्छ । तर कतिपय मानिसहरु बिहेपछि सन्तान जन्माउन चाहदैनन् ।
करियर, स्वतन्त्रता र घरब्यवहारमा फस्न नचाहाने भन्दै केहि दम्पती सन्तान जन्माउने चाहना मार्दछन् । तर हरेक मानिसको जीवनमा सन्तान अति महत्वपुर्ण हुन्छ । सन्तान हुनुको सकारात्मक पक्ष असीमित छन् । आज हामी यसबारे चर्चा गर्नेछौ ।
१. दम्पतीबीचको मायाको चिनोको रुपमा सन्तानलाई हेरिन्छ । यसले पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध सन्तान हुनुपुर्व शिशु गर्भमा रहेदेखि बलियो पार्दछ । श्रीमानलाई श्रीमतीको सबैभन्दा माया लाग्ने समय यहि हो ।
२. एक बाबुलाई श्रीमती गर्भवती भएदेखि आफ्नो सन्तानबारे ब्यग्र प्रतिक्षा हुन्छ । यो प्रतिक्षा कुनै परीक्षा, सम्पती वा नोकरी पाउँदाभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ ।
३. सन्तानको आगमन पछि दम्पतीबीच थप आत्मियता बढ्ने गर्दछ । यसले सम्बन्ध थप प्रगाढ र मजबुत बनाउँछ ।
४. कुनै पनि महिलाका लागी उसले प्राप्त गरेको ठुलाठुला सफलताभन्दा आमा बनेको क्षण महत्वपुर्ण हुन्छ । नारीहरु आमा भएपछि मात्र आफूलाई पूर्ण ठान्छन् । यसका लागी ९ महिनासम्म गर्भधारण गर्नु, यस अवधीमा अनेकौं योजना र सपना बुन्नु यो भन्दा सुखद पल अर्काे हुन सक्दैन ।
५. सन्तानको आगमनसँगै परिवारमा आउने खुसी असिमित हुन्छ । एक आमा वा बुवाका लागी सन्तानको आगमन आनन्दित रहने गर्दछ ।
६. बच्चालाई भगवानको प्रतिक र आर्शिवाद मानिन्छ । उनीहरुमा जस्तो निश्चलता र सत्यता ठुला मानिसमा हुदैन । यहि कारणले हरेक अभिभावकका लागी सन्तान जीवन जिउने कारण बनिदिन्छन् ।
७. सन्तान भएपछि जस्तोसुकै विवादका बीचमा पनि परिवारलाई एकसुत्रमा बाध्ने काम गर्दछ । अझ जब बच्चा बोल्न, हिड्न वा हास्न थाल्दछ यसले परिवारबीचको मनमुटाव नष्ट पार्दछ ।
८. जब आफ्नो सन्तान हास्न थाल्दछ वा आफुसित आउन खोज्दछ त्यो पल मष्तिकमा रहेको जस्तो सुकै तनावपनि हराएर जान्छ । बच्चाको एक मुस्कानले तपाई सारा तनाव भुलाउन क्षमता राख्दछ ।
९. सन्तान भएपछि आफ्ना आमाबुवाले आफुलाई गरेको लगानी र प्रेमबारे जानकारी हुन्छ । यस अलावा आफ्नो बाल्यकालमा फर्काउन पनि सन्तान महत्वपुर्ण हुन्छन् ।
१०. सन्तान हुने अभिभावक आफुलाई कहिल्यै एक्लो महशुस गर्दैनन् । अझ आमाहरु जतिसुकै समस्या भएपनि आफ्नो कुविचारलाई सन्तान सम्झेर जीउने प्रयाश गर्दछन् ।